MA LACAGTAYDUU JECLAA MISE ANIGA AYUU I JECLAAA???? | Gaaloos.com
Home » galmada » MA LACAGTAYDUU JECLAA MISE ANIGA AYUU I JECLAAA????
MA LACAGTAYDUU JECLAA MISE ANIGA AYUU I JECLAAA????
Manta waa malitii ugu horeeyay ay bilaweeso iskulka la yiraahdo Ahmad Gureey. Sina wey u faraxsantahay sina wee u naxsantahay sababto ah iskulka ay bilabeyso cidna kama taqaano. Macalimin cusub iyo arday cusub ayee la kulmeesa manta sidee la isusoo dhaween donaa ayey ka fikireysa.
Ruweyda waxay aheyd gabar da,deeda qiyaas ahaan jirtey 19jir. Waxay aheyd gabar aad u qurux badan oo la dhihi karo waqti xadirkaas in ay iskulka dhan ay ugu qurux badneed. waxay aheyd gabar aad u furfuran oo bashaash ah soo jidasho leh dadkana aad u qadariso.
Ruweyda waxay dagneyd xamar gaar ahan dagmada xamar weyne. waxay ka dhalatay reer qani ah oo reerkeda badankooda yurub ayey ku maqan yihiin.Waxay la noleyd hoyadeeda iyo abahadee. Ayada bes ayaa waqtigaas jooktay walalaheeda kale dibada ayey ku kala maqnayeen. Ruwayda waxa lagu koriyay koolkoolin. Wax walba ay jeclaateyna wey heli jirtay. waxay aheyd gabar aan jecleen in wiilasha ay xiriir la sameyso ama bila macno la shekeysato. Waxay laheyd hal wiil ay saxibo ahaayeen yaranteeda ayna diris ahaayeen waxa la oran jiray Xasan.
Ruweyda markii ay aroortii aadey iskulkii ayaa waxaa meesha ay isku barteen gabadh
gabadhii ay is barateen ayaa waxey isku deysey iney kala barto ardeyda ay isku galaaka noqon doonaan .
Waxba ma dhibin oo durbadiiba iskulka ayey la qabsatay madama ay ruweda ay aheed qof furfuran oo sheekeyso mar walbo aadna waxey uga heli jirtey iney dadka ka qosolsiiso
Ardaydii dhan ayaa jeclaatay oo qof walba wuxuu ku hami dheraa iney reweydo soo dhinac fadhiisato madaama ay tahay gabadh dadka u fahmeysa .
Waxay saxibo noqdeen ay iska heleen gabar la oran jiray Ismahaan oo ayadana aheed gabar ad u wanagsan. ISmahaan ayaa ugu shekeen jirtay wax walba iyo arday walba dabeecadisa iyo macalimintaba.
Xisadii ugu horeeyay waxaa soo galay macalin ILyaas. Macalin Ilyaas wuxuu aha macalin da yar oo dagan oona qeeli badneen.
Ilyaas wuxuu dagnaa xafada war dhiigley. Qoyskiisa wuxuu ka koobna asiga iyo lawo wiil kale iyo lawo gabdhood. Reerkooda waxay ahayeen reer iska normaal ah. Ilyaas iyo walalkiisa ka weyn ayaa u shaqeyn jireen reerka madama inta kalena ay yarayeen.
Wuxuu macalin ka ahaa iskulka Axamad gurey. Wuxuu dhigi jiray madoyinka xisaabta iyo fisikiska.
Fasalka markuu soo galay ayuu ku bilaaway sidaan: Haye manta waxaa filaya in fasalka nagu soo birtay arday cusub bal an si wacan aan u soo dhaweyno.
Macalin Ilyaas intaas ayuu warkiisa ku soo koobay. xisadii ayaa bilaabatay. Malintaasna waxa la lahaa xisaabta.
Ruweydana aad bey u jecleyd xisabta aslan waxay aheyd gabar aad u jecel wax barashada.
Ruweyda saxibteeda marwalba waxay ugu shekeen jirtay macalin Ilyaas oo gabdhaha dhan jeclayeen. Madama uu ahaa qof dagan ona af gaban. Gabdhahana badana ma dhaxgali jirin iyo wax yalo badan. Ruweyda aad bey u jecleyd iney wax badan ka ogaato macalin Ilyaas ayadoo isla yaban. Madama aan waligeeda ay san ka helin wiil ama aysan jecleenba in ay ogaato afaaro kale. Lakin isbadal ayaa ku soo kordhay tookadaan oo waxay araktay in macalain Ilyaas markii loogu shekeenaayo in ay usii bogeyso waa cajiiib bey ayada is dhihi jirtay.
Mudo kadib ruweyda waxay dareentey in uu mesha yimaadey ka heli taan. Oo ay ka heleeso macalin Ilyaas.Waxay ka heshay dabeecadiisa amusnantiisa oo gabdhaha sidaas u dhaxgaleenin maskinimadiisa…
Ruweyda boqolaal will ayaa hamin jiray ayadana dheg jalaq uma siin jirin oo ma aysan jecleyn wax xiriir la dhaho. Waxay ku mashqulsanan jirtay waqtigeeda badankiisa wax barashadeeda iyo marmar uu imaan jiray wilkii dariskooda ahaa xasan marna walalaha ahayeen.
Sanad kadib Ruweyda waxay dareentay in ay jeceshahay macalinkeeda Ilyaas. Taloo ILyaasna maxaa qalbigiisa ku jiro miyuu la wadi dona mise qalbigiisa waxba kuma jiro oo jacelka wuxuu noqon dona hal dhinac oo kaliya.
ILyaas maalintii ugu horeysey uu arkay Ruweyda ayuba ka helay asigana dhinaciisa. Oo marwalba ayada ayuu ka fikiraa sida uu ugu sheegan laha jacelkiisa. Asigana wuxuu isweediya talo wax mey kula qaban donta mise jid cad bey kaaga tagi doontaa. Iyo waxa badan ayuu isku dayay inu u soo bandhigto jacelkiisa lakin wuxuu is dhihi jiray waa ceeb sidee u jeclatay gabar ardaydaa ah wuu cabsan jiray in dadka ku ogadaan oo mel kale la gaarsiyo. Ruweydana dhinaceedana sidoo kale bey ugu fikiri jiratay. Labadoodaba isma oga horaa loo yiri “Labo kala bariday kala war la”
Ruweyda waxay dareentay in macalin Ilyaas inuu jecelyahay. Sababto ah waxay araktay inuu marwalba la shekeesanayo o la kaftamayo madama loogu baranin inuu gabdhaha la sheekeysto. Iyo in uu mar mar hadalo ku turturo sarbeeb ahaan. Mar mar wuxuu dhihi jiray adiga gabdhaha dhan waa igaaga duwantahay iyo wax yalo nocaas oo kale.
Xitaa marmar ayaa Ruweyda lagu dacayadeen jiray gabdhaha ay saxibada ahayeen. Waxay dhihi jireen in uu macalin Ilyaas uu jecelyahay ruweyda. Ayadana aad bey ugu xishoon jirtay marwalba waxay iska dhihi jirtay waxaas ma jiraan iyo macquul ma ahan. Horaa loo yiray “Nimaa wax ogeen ALLA ma cadaabo”
Ruweyda aad bey u faraxday madama ay darentay inu jecelyahay. Lakin asiga dhinaciisa kurbo aya ka saran oo wali ma dareemin inee jeceshahay iyo in kale. Taasna waxa u wacneyd Ruweyda ayaa aheyd gabar ad u af gaban ona aad u xishood badan. Aan hadal walba ku hadli karin. Sidii saas u aheyd xalkii malin walba waa la is arka si caadi ah
Mudo aya ka soo wareektay oo waxaa la galay dugsiga sare fasalka u danbeeyay.
Qof walba jacelkiisa wuu qarsaday oo qof walba wuu baqayaa geed buu ku gabanyahay. Ilyas naftisa wuxu iska aminay in ayadana ay jeceshahay madama oo la shekeesato markuu xanuunsado ay u takto oo soo boqato.
Title: MA LACAGTAYDUU JECLAA MISE ANIGA AYUU I JECLAAA????